The Unholy (2021) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Bates Wilder, Cary Elwes, Celeste Oliva, Christine Adams, Cricket Brown, Diogo Morgado, Jeffrey Dean Morgan, Katie Aselton, Marina Mazepa, William Sadler
ဒီသရဲကားကိုလညျး မြှျောနကွေမယျထငျပါတယျ။ဘုရားကြောငျးတဈခုရဲ့ ဘုနျးတျောကွီးတဈယောကျမှာ တူမလေးတဈယောကျရှိပါတယျ။အဲဒီကလေးမလေးက ဆှံ့အနားမကွားသူလေးပေါ့။တဈနမှေ့ာတော့ မယျတျောမရေီကိုတှခေဲ့တယျဆိုပွီး ရုတျတရကျ စကားပွောနိုငျလာ နားကွားနိုငျလာခဲ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ မယျတျောမရေီရဲ့ ကိုယျစား ဖြားနာသူတှကေိုပါ ကုသပေးနိုငျလာတဲ့အခါ ဘုရားကြောငျးနဲ့ သတငျးထောကျတှရေဲ့ အာရုံစိုကျစရာ ဖွဈလာခဲ့တယျ။
ဒီတော့ သူ့ကိုပထမဆုံး တှဆေုံ့ပွီး ခငျမငျခဲ့တဲ့ သတငျးထောကျ ဖငျးနျကသူ့ရဲ့သတငျးကို ကမ်ဘာကွီးသိအောငျ ခပြွလိုကျပါတော့တယျ။ဖငျးနျဟာ အရငျတုနျးက သဘာဝလှနျသတငျးတှကေိုအတုလုပျမှုနဲ့ နာမညျပကျြရှိခဲ့သူ ဖွဈတာကွောငျ့ဒီသတငျးကွီးဟာ သူ့ရဲ့ ဂုဏျသိက်ခာကို အဖကျဆယျစရာ ဖွဈလာပါတယျ။ဒါပမေယျ့ တကယျတမျး လူတှကေိုးကှယျမိနတေဲ့ မရေီဟာအပြိုစငျ မယျတျော မရေီ မဟုတျဘဲ အခွား မိစ်ဆာတဈကောငျ ဖွဈနတေဲ့အခါ….
ဒီသရဲကားကိုလည်း မျှော်နေကြမယ်ထင်ပါတယ်။ဘုရားကျောင်းတစ်ခုရဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ယောက်မှာ တူမလေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။အဲဒီကလေးမလေးက ဆွံ့အနားမကြားသူလေးပေါ့။တစ်နေ့မှာတော့ မယ်တော်မေရီကိုတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုပြီး ရုတ်တရက် စကားပြောနိုင်လာ နားကြားနိုင်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မယ်တော်မေရီရဲ့ ကိုယ်စား ဖျားနာသူတွေကိုပါ ကုသပေးနိုင်လာတဲ့အခါ ဘုရားကျောင်းနဲ့ သတင်းထောက်တွေရဲ့ အာရုံစိုက်စရာ ဖြစ်လာခဲ့တယ်။
ဒီတော့ သူ့ကိုပထမဆုံး တွေ့ဆုံပြီး ခင်မင်ခဲ့တဲ့ သတင်းထောက် ဖင်းန်ကသူ့ရဲ့သတင်းကို ကမ္ဘာကြီးသိအောင် ချပြလိုက်ပါတော့တယ်။ဖင်းန်ဟာ အရင်တုန်းက သဘာဝလွန်သတင်းတွေကိုအတုလုပ်မှုနဲ့ နာမည်ပျက်ရှိခဲ့သူ ဖြစ်တာကြောင့်ဒီသတင်းကြီးဟာ သူ့ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို အဖက်ဆယ်စရာ ဖြစ်လာပါတယ်။ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်း လူတွေကိုးကွယ်မိနေတဲ့ မေရီဟာအပျိုစင် မယ်တော် မေရီ မဟုတ်ဘဲ အခြား မိစ္ဆာတစ်ကောင် ဖြစ်နေတဲ့အခါ….
Option 1 teracloud.jp 466 MB SD (480p)
Option2onedrive.live.com 466 MB SD (480p)